Ahụmahụ Semalt: Uru dị iche iche SEO na-enye ndị ahịa
SEO bụ akụkụ dị mkpa nke atụmatụ ahia, nke na-enye ohere mmalitena ndị ọrụ guzosiri ike kwalite ọrụ ha na ngwaahịa ha. Nnyocha na-ekwu na pasent 82 nke ndị na-azụ ahịa na-ekweta mmetụta nke nsonaazụ ọchụchọịzụta mkpebi, na pasent 70 n'ime ha zụrụ ngwaahịa na-adabere na nsonaazụ ọchụchọ. N'ihi ya, ọhụụ bụ ihe dị mkpa maka azụmahịa.
Jack Miller, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị kọwaa uru SEO na-enye ndị ọchụnta ego.
1. Ntughari Ntughari
Ntughari na ihe mbu bu ihe. Ebumnuche nhazi ahake akara ke nsụgharị search engine. Ya mere, ihe mgbaru ọsọ kasịnụ bụ ịkọwa akara gị na nchọta ọchụchọ. Tinyere weebụsaịtịnjikarịcha, usoro mgbasa ozi mgbasa ozi na-enyekwara gị aka ịme aha aha. Mgbe ndị mmadụ tinye aha aha gị na ịchọchọtakwuo ozi gbasara ya, a ga - edepụta ihe ndekọ mgbasaozi nke gị na nchịkọta isii dị elu, ya mere, ịme ka ozi ahụ dị ike,nke ụlọ ọrụ gị ga-achọ ịzọpụta. Ihe ndị a na-eme ka ndị mmadụ nwee mmasị na ndị ahịa.
2. Nnyocha Research
Ahịa ahia gị na nkwado gị ga-adabere na yaederede eji mee na weebụsaịtị. Ọ na-enye aka ịhazi ndị ọkachamara 'mmasị ma bulie ọdịnaya ederede nke saịtị na ibute peeji nke.Nnukwu nchịkọta isiokwu na-enye gị ohere ịmepụta ndepụta ozi na-enyere ndị ahịa aka ịmatakwu banyere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Dị kaihe ị ga - eme, ị ga - enweta ezigbo ndị ahịa, ọdịnaya dị mma na ogo dị elu, nke na - emecha kwọga okporo ụzọ gị.
3. Azụmahịa Organic
Ezi echiche, ngwaahịa, na ọrụ gbasara mgbasa ozi, na ihe niilegburugburu ya na - arụpụta ọkwa ndị ka mma, nke na - esite na njikọ njikọ, ntinye na nsonaazụ mmadụ. Iji nweta ego,ndị ọchụnta ego ga-echekwa ikikere nke azụmahịa maka oge mmepe..Usoro okporo ụzọ bụ isi ihe dị ugbu ana ihe ndị ga-eme n'ọdịnihu, nke na-eweta ụgwọ ọrụ dị ukwuu maka azụmahịa gị.
4. Uru bara uru
Mgbasa ozi SEO na-enyere aka imeri ndị asọmpi. Ndị ụlọ ahịa kwesịrịwezuga ahia ha n'emeghi mpi ha ma jide n'aka na ogba n'etiti ha na ndi oru ozo di iche iche na-emewanyewanye karianhazi ọchụchọ.
Ngosipụta mmekọrịta ọha na eze na-akwado ọkwa dị elu na nyocha nke anụ ahụịkwọ ụgbọala na saịtị ahụ. Mgbasa ozi mgbasa ozi na-eme ka uto a too, na-aghọ ihe dị mkpa maka azụmahịa ọ bụla. Ndị ụlọ ahịa na-akwado haMgbasaozi mgbasa ozi na-eme mgbalị siri ike SEO.
6. Inweta Ntụkwasị Obi
Ụlọ ọrụ ndị a na-emeghị nke ọma enweta obere ntụkwasị obi n'ihi nanjirimara dị oke ahịa na ahịa. Ndị ọrụ nwere ntụkwasị obi karịa na saịtị ndị dị mma maka isiokwu ha kachasị mma. Njikọ search engine nke Organicmelite ntanetị saịtị ka eji tụnyere nsonaazụ ọchụchọ. Ọkwa dị elu na engines ndị a na-enyere ụlọ ọrụ ọhụrụ aka ịkwado onwe ha n'elunke ahịa na anya nke ndị ha na-ege ntị na-ege ntị.
7. Ogologo Ugo Ogologo Ogologo Oge
Ịmepụta ihe nkwụsị ego dị ogologo oge chọrọ ijide SEOdị ka atụmatụ dịka ọ na-akwalite ntinetị n'ịntanetị maka ndị ọchụnta ego. Ụla ọ bụla a na - eji SEO na - eme ka ọ baa uru.
SEO bụ ọrụ na-ewe oge, nke chọrọ nnukwu iheihe onwunwe. Otú ọ dị, ọ bụ ezigbo ahịa dijitalụ nke na-arụ ọrụ dịka ego eji eme atụmatụ maka oge dị ogologo. Dị ka Ọkachamara Ndị ahịa achọpụtawo, SEO na-enyere ndị ọchụnta ego aka ịmalite ọrụ ha, na-ewulite ntụkwasị obi na ntụkwasị obi, na-echekwa ego, ma na-akwado nkwado Source .